Shir ay isugu yimaadeen Madaxda dowladaha Caalamka Islaamka oo Makka ka furmay. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Shir ay isugu yimaadeen Madaxda dowladaha Caalamka Islaamka oo Makka ka furmay.
On May 30, 2019 1,713 0
Magaalada baraeysan ee Makka Al Mukarrama ee dhulka Xaraneynka waxaa ka furmay shir ay isugu yimaadeen madaxda dowladaha carabta iyo kuwa caalamka islaamka.
Shirka waxaa soo qaban qaabiyay maamulka Aala-sucuud, waxaana boqorka maamulkaas uu maalmo kahor casuumaad u fidiyay inta bada dowladaha caalamka islaamka, iyadoona kulmada dhacaya lagu tilmaamay kuwa deg deg ah.
Dowladaha lagu casuumey kulanka ka furmay magaalada Makkah, waxaa ku jirta dowladda Qadar oo uu khilaaf siyaasadeed kala dhexeeyo maamulka Aala-sucuud, waxaana Qadar metalaya ra’iisul wasaaraheeda oo lagu magacaabo Cabddalla bin Naasir Aala-thaani.
Ajanadaha kulmadan ay isugu yimaadeen madaxda carabta waxaa lagu sheegay iney tahay in laga hadlo xiisadda siyaasadeed ee ka jirta caalamka, gaar ahaan mida u dhexeysa dowladaha Maraykanka iyo Iiraan.
Sidoo kale weerarada sii xoogeystay ee malleeshiyaadka Xuuthiyiintu dhowr jeer ku garaaceen dhulka Xarameynka, gaar ahaan goobaha xasaasiga ah ee maamulka Aala-sucuud ayaa keeney cabsida Aalasucuud, taas oo soo dedejisay in kulankan la iclaamiyo.
Inta badan warbaahinta caalamka ayaa hadal haya wafdiga dowladda Qadar, maadama Aala-sucuud uu dowlada Qadar ku eedayay iney taageerto waxay ugu yeereen argagaxisada, hadana sida ay ku dhacday iney ku marti qaadaan shirka ka furmay magaalada Makkah.
Waxaa la filayaa iney kasoo baxaan kulamadan, bayaanaad lagu cambaareynayo duqeymaha Xuuthiyiinta, iyo dowladda Iiraan, oo ay xiisado kala dhexeyso dowladda Maraykanka.
Maleeshiyaadka Xuuthiyiin oo xiriir laleh Iiraan ayaa bishaan gudaheeda weeraro khasaara maaliyadeed dhaliyay ku qaaday Keydadka shidaalka ugu waaweyn wadanka Sacuudiga, sidoo kale kooxo loo malaynayo in ay taageersanyihiin Iiraan ayaa weerar ku qaaday illaa Afar Markab oo ku socdaalayay xeebaha wadanka Imaaraatka Carabta.
Siyaasiyiinta qaar ayaa sheegaya in shirka ka furmay Makkah uu qaban qaabadiisa lahaa Donald Trump, oo doonaya in markale uu dhaqaale horleh ka qaato Maamullada carbeed, isagoo u ballanqaadaya inuu ka difaacyo halista dowladda Iiraan.
Shirkan ay isugu yimaadeen madaxda carabta, ma ahan kii ugu horeeyey ee ay isugu yimaadaan, waxaana dadka ay sheegayaan inaaney wax natiijo ah kasoo bixi doonin.